Bar, liphefumulelwe ulwandle futhi Absinthe, noma mhlawumbe isithombe "Absinthe ophuzayo" Picasso sika, elise Omsk futhi ubizwa ngokuthi "Absinthe kolwandle". Namuhla sizoxoxa ngokuningiliziwe mayelana nempahla, xoxa amazwana ngakho, thola ikheli, nokuningi.
Le ndawo iyi-Isaphulelo-bar, itoho Karaoke bar ngisho nightclub. Kukhona ngokuvamile amaqembu ayeba nge Omsk, DJ kokubili ochwepheshe kanye Wabasaqalayo, uzama wodwa endle lokuzijabulisa zomphakathi kanye lokusungula zomculo. Futhi "Absinthe Sea" ezemidlalo ukufana ukusakaza, okuyinto eyenza le yokudlela ukuba esisemqoka abalandeli abaningi ezemidlalo, uthande ukuze baphumule ubhiya ngesikhathi ebuka hockey noma ibhola.
"Sea Absinthe" (Omsk) - ibha ukuthi ngenkuthalo baxhumana izilaleli zakhe. Ngokwesibonelo, lwalumumethe emncintiswaneni ithalente, lapho umuntu ongeza ibha yesehlakalo nohlelo lwawo siqu, noma isiqondiso kungenzeka. DJ Umeme nabaculi, kanye labo ukubhala izinkondlo, noma izenzo uhlobo yokuma-up.
Charlie Chaplin nabanekhono emncintiswaneni
Ngo "Absinthe kolwandle" avame labetibambile imincintiswano DJs, kodwa isinyathelo yakamuva - kungcono ngisho ithalente show elikuvumela ukuba bazikhulumele ngalokwakhako imuphi umhlali Omsk. Ibha iphinda isingathe iqembu yasekuqaleni, anikezelwe ngesihloko, noma ukuhlola. Ngokwesibonelo, lapho kwaba nomhlangano ntambama amafilimu buthule, eyabonisa isiqeshana yamahlaya, lapho kudlalwa Charlie Chaplin.
Noma ubani oke waba angene ibha, wathi emkhathini ekhethekile esikhona lapha. Ngezinye izikhathi incike umculo eyadlalwa DJs, ngoba wonke umuntu isitayela sakhe siqu: isibonelo, DJ tribal usebenzisa umculo wabo is egxilile i-trance, eziningi kangaka ukhumbule imicikilisho yokusebenzelana Shamanic nokudansa nge ithamborini emhlabeni komlilo.
Ikheli bar "Sea Absinthe"
Omunye Amabha "Sea Absinthe" (Omsk), ikheli lapho Lenin Street, 5 - ungowokuqala yokudlela Franchise, labavulekela kuleli dolobha. Ibha yesibili isendaweni Prospekt Mira, 19/2.
Franchise "Sea Absinthe" (Omsk) - Isithombe imigoqo ingatholakala kulesi sihloko noma kwi website esemthethweni lesikhungo - inikeza lahlukene ukuzijabulisa. Into ebaluleke kakhulu - it is a bar contact, okubhekisele "Absinthe kolwandle". Imininingwane Bar - umqondo ethandwa kakhulu zezikhungo kwentsha. Le ndawo ihlanganisa izici imigoqo, amaqembu, amathilomu, ukuzijabulisa okubandakanyayo nethuba lokuzimbandakanya empilweni kwebha indlela eqondile yokufinyelela - okwenza ekhonsathini yangasese, isibonelo, ngo kohlaka imincintiswano.
Isici esiyinhloko Isaphulelo Bar
Bar "Absinthe Sea" (Omsk) - yindawo lapho kuyinto elula ukuhlangana nabangane babo, ukugubha, ukudansa noma nje ube nesidlo sakusihlwa, njengoba menu azwakale kamtoti abapheki ukwazi Izinto sabo.
Ngohlelo olusha lwe-bar edonsela nezilaleli futhi kuyanda phakathi partygoers, hhayi kuphela. Isici esiyinhloko ifomethi "Isaphulelo Bar" kuba phambi uhlelo uxhaso izaphulelo kumakhasimende njalo. Isebenza lesi simiso esilandelayo: nge isaphulelo "Absinthe kolwandle" ikhadi bar, ungakwazi ukuletha abangani 10, ngayinye oyithola amabhonasi kusengozini. Abangani bakho bazoba oda endaweni yokucima ukoma noma okuthile ukuletha abangane babo, bese uthola amabhonasi ngaphezulu ekhadini futhi ekugcineni uzokwazi ugcine up for a holiday khulula ku "Sea Absinthe" noma isaphulelo umxhwele.
Bar "Absinthe Sea" (Omsk, "Crystal" ku Lenin Street) - ingenye Amabha ethandwa kakhulu kuleli dolobha. By the way, amanani kukhona isikhathi ezahlukahlukene zosuku, isibonelo, ngesikhathi sasemini, konke kuba ishibhile futhi khona Isaphulelo - futhi ingabe cishe bengabonakali nesabelomali.
Kukhona yokudlela efanayo igama "Absinthe kolwandle" Oilman (Omsk). Lesi yisihloko sesibili Franchise ibha e-Omsk, yena yaziwa futhi akukho ngaphansi ethandwa kuka-bar "Crystal".
imenyu yokudlela sika
Isaphulelo Bar "Absinthe Sea" (Omsk), inikeza imenyu ezihlukahlukene. Njengoba yokudlela ngokukhethekile cuisine Asian futhi zaseYurophu futhi isiRashiya, ungathola izinto eziningi ezithakazelisayo on the imenyu.
"Absinthe kolwandle" - yindawo lapho abantu abasha bahlangane njalo Lwezinhlelo ezemidlalo noma amaqembu, ngakho lapho ngokuvamile wathenga Ungadla nge ubhiya. Empeleni, ubizwa ngokuthi omunye izigaba kumephu imenyu "Absinthe kolwandle".
Kulesi sigaba ungathola izinhlobo eziningana sandwich ngentengo ruble 144 ngosuku futhi 198 ebusuku, Burger eyosiwe burritos, izinhlobo eziningana imiqulu, quesadillas, ingulube izindlebe, izimfanzi croutons, ushizi sezinsaba okuningi ukuthi iya kahle ubhiya. Intengo zokudla ngaphakathi ruble 100-150 ngosuku futhi 200-250 kusihlwa. Ngaphandle amasethi ekhethekile enkulu nge ubhiya, kuyafaneleka ukuthi intengo ruble 500 kusihlwa futhi kuze kufinyelele 400 ntambama.
kungenziwa yayala kusuka Ungadla abandayo ibha ezahlukene carpaccio, imiqulu, ukhukhamba, ushizi assorted, ubhekeni inyama ngamanani neze kulokho.
Amasaladi nazo ukukhetha ezinkulu, kukhona "Olivier" elithi "Khesari,", "Caprese", "ngesiGreki" ngenani esifundeni ruble 100-200.
Salsola noma sushi
Kunezinhlobo eziningana isobho, kuhlanganise isobho, goulash kanye hodgepodge - isobho amadoda ozithandayo kanye izitsha hot kusukela - ukukhethwa enkulukazi inyama kanye nezinkukhu ezihlukahlukene, walungisa ngokusho zokupheka ezahlukene abantu baseYurophu abathuthela kule cuisine pan-Asian. Ngokwesibonelo, kukhona carbonara spaghetti futhi Udon noodle, Steak kanye amaqanda futhi cutlets Pike, risotto nge inkukhu kwesibindi nenhlanzi skoblyanka. ukuba izitsha main amanani uhla ruble 100-350, futhi emini nantambama izintengo iyiphi isidlo futhi ziyahlukahluka kancane bodwa.
Futhi izinto eziningi phezu imenyu izitsha zazo okulungiselelwe phezu hlupha: imifino, inyama, inhlanzi, ayi, kebabs - eningi sekukuhambela kahle ubhiya noma iwayini. ukudla sushi futhi ku imenyu abathandi cuisine Japanese, eziningana side izitsha, ehlukahlukene nososo ezifana aioli, netiyela-taare, utamatisi kanye nabanye.
Kulaba kophudingi zihlanganisa ice cream ofakwe ezahlukene, izithelo ipuleti, isanqante ikhekhe, tiramisu kanye khekhe - othobekile kodwa Ukukhetha nenhle we uphudingi kakhulu emhlabeni ukupheka.
Isaphulelo for lokuzalwa
Bar "Absinthe kolwandle" Omsk (Lenin - mgwaqo lapho likhona) itholakala enkabeni yedolobha, okusho ukuthi kuze kube bar kalula. Wonke umuntu uyazi indawo lapho yena, sinjalo ibha kuyinto neze awunalutho. Nakhu deal, futhi ngalolo suku kakhulu kwehlisa amanani ethu kanye Isaphulelo uhlelo ukuheha ezingasho amakhasimende amasha. Kusihlwa, ibha uhlale ezinomsindo futhi kumnandi, ngoba cishe nsuku zonke lapha kufika ezinye uhlobo party.
Ukuze lokuzalwa nezikhungo ikhadi Isaphulelo nethuba uthole ruble 500 ikhadi okungatholakala wachitha at the bar usuku lokuzalwa kwakhe. Sicela uqaphele ukuthi kudingeka kube ophethe kuphela idokhumenti esiqinisa usuku lwakho lokuzalwa.
Yini abantu bathini mayelana "Absinthe Yasolwandle"
Izivakashi 'Absinthe Sea "ukukhuluma mayelana nesikhungo ngezindlela ezahlukene. Izinto eziningi ezijabulisayo ngalolo suku kubha muhle kwasemini futhi ukuphumula ngaphandle kokuchitha imali eningi. Ezinye nexhala uhlelo ikhadi isiphetho, njengoba kubonakala kancane nzima, kodwa isikhathi ngeke kubonakale ungakhululekile, kodwa okunalokho - usizo olukhulu ezimweni lapho bar eziningi abantu, isibonelo, futhi ngosizo ikhadi bar, ungakwazi ukukhokha ngokushesha kunokuba usebenzisa imali kanye namakhadi asebhange.
ibha yesistimu ikhadi wasebenza kahle isikhungo, ngakho-ke akukho ukubambezeleka nge ukubala ngeke Ngokungafani izimo ezicishe zifane nalezi nezinye izinhlobo izimali. Lapho ukuthi uhlelo ikhadi unikeza ikhasimende eziningi amabhonasi, izaphulelo kanye amathuba okuhlanganyela ukukhushulwa.
Amabha Abaningi Izivakashi ukudumisa cuisine esiphundu. Abapheki - amakhosi zangempela, abalungiselela kakhulu, amazambane esihlwabusayo ikakhulukazi ekhaya-like ngendlela yasemakhaya. Self-service liphinde kusimo ezithile, kodwa labo bavisise Isaphulelo ibha, bafinyelela esiphethweni ukuthi imodeli ezifana kwamakhasimende iyona engcono kuleli cala.
"Sea Absinthe" - njalo Crest igagasi
Umbono kungatholakala njalo, okuyinto wazi nobungane abasebenzi, ikakhulukazi, abaningi bathi izulu bartenders kwenziwe kahle, ngoba ukwenza kahle futhi oweta umsebenzi.
Iqiniso lokuthi kukhona Karaoke, nabanye abaningi abanjengawe kwibha. Ngokuvamile begubha amaholide, njengesixhumo sezindluzele / hen amaqembu, futhi eqinisweni kungekho karaoke kuleli cala ongakwazi ukuzenza. Abanye bathi izinga imishini, esetshenziselwa emaphathini. Thanda umsindo omkhulu kuleli hholo, kuyilapho wezangaphakathi akunakwenzeka ukuqagela. Kodwa ingaphakathi, eziningi kakhulu babe ukunambitha. Phela, kukhona ibha ezinkulu, okungase elise ukungabi amathebula mahhala, futhi isigaba lapho kukhona abaculi abaculi ehlukahlukene, futhi ihholo amatafula, isitayela okusikhumbuza Scotland.
Isaphulelo Bar "Absinthe kolwandle" - kuyinto format entsha ukuthi abaningi ukunambitha. Amabha izilaleli - abantu iningi lawo kungabazalwane abasebasha, othanda Eclecticism e design elingaphakathi, ezihlukahlukene enkulu ukuzijabulisa, ukudla okuhle kanye wobungane.
"Sea Absinthe 'uhlale Crest igagasi yemfashini ehambisana izimfashini zamuva. Uma imfashini - akusiyo nje izwi, futhi ngobuhlakani - injongo yokuphila, khona-ke uzongithanda le isikhungo emangalisayo, futhi uzoba ikhasimende lakhe njalo.